Egosiputa ọnọdụ 5 SPA maka 2019
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ Lithuania » Egosiputa ọnọdụ 5 SPA maka 2019
Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ Lithuania • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
2019dị XNUMX SPA kachasị mma bụ ozi ọma maka okike na ndị hụrụ ya n'anya.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ ọdịmma na-eto ngwa ngwa karịa oge ọ bụla. N'otu oge ahụ, nlebara anya nke SPA agbanweela site na ịma mma gaa n'ọdịmma mgbanwe mgbanwe, na -emepụta usoro ọhụụ nke ga-ebugharị ụwa SPA na 2019.
Northern Europe - na-ebute ụzọ nke SPA ọhụrụ - anakwerela ụfọdụ n'ime ọnọdụ nke afọ na-abịanụ.
"N'afọ a, anyị na-ekiri" azụ na okike "SPA. Anyị na-anụkarị site n'aka ndị ọbịa anyị na nhọrọ ụlọ oriri na ọ SPụ SPụ SPA ha na-adabere na nso mbọ dị n'oké ọhịa na ụdị ọgwụgwọ ọ ga-enye. K believestutis Ramanauskas, Director nke Ahụike Ahụike na Druskininkai, Lithuanian SPA obodo nke nwere ọdịnala ọdịnala nke narị afọ gara aga.
Dabere na SPA na ndị ọkachamara ahụike nke Druskininkai, ndị a bụ isi usoro ise ha na-atụ anya ịhụ na-eto eto na ewu ewu na 2019:
Na-aga ogologo SPAcation. Omume ohuru a bụ ịga ezumike na họtel SPA ma nwee ọ treatmentsụ kwa ụbọchị. SPlọ ọrụ SPA na-enye nchịkọta ezumike na azụmahịa kachasị mma maka ndị dị njikere ịnọ karịa ụbọchị ole na ole, na-adọta ọtụtụ ndị mmadụ ịnwale usoro ọhụrụ. SPAcation nwere ike ịnwe oge ezumike ike, ngwugwu mmega ahụ ike na ahụmịhe iri nri. Ndi Aman Spa na Aman Le Melezin na French Alps na-enye ngwugwu pụrụ iche nke ski ski, pre-ski yoga sessions, nri abalị, na ọgwụgwọ SPA maka ndị na-anọ na ebe ezumike site na 3 ruo ụbọchị 6. Nkwari akụ Kalevala na Finland nwere nhọrọ nke nchịkọta nke gụnyere ịhịa aka n'ahụ, saunas na baths jikọtara ya na njem safari nke snowmobile na ihe omume ndị ọzọ na-atọ ụtọ.
2. Ọhịa ịsa ahụ. Shinrin-Yoku bụ omume ndị Japan na-asa ahụ maka ịsa ahịhịa amamịghe iji mepee ikike dị omimi nke oke ọhịa ma jiri ya maka ọgwụgwọ na ọgwụgwọ. Usoro ọgwụgwọ a, nke gụnyere ịga ogologo ije n'oké ọhịa, a na-atụ anya na ọ ga-ewu ewu gburugburu ụwa na 2019, ebe ndị mmadụ na-agbaso usoro ahụike na ahụike zuru oke maka ahụike ha. A na-egosiputa ịsa ahụ n'ime oke iji belata ogo nke cortisol, belata ịda mbà n'obi, belata nrụgide ma nwee mmetụta dị mma na ọbara mgbali. Ndị na-asụrụ ọhịa ọhịa Japan na-agakarị Ogige Ntụrụndụ Chubu-Sangaku ebe ha nwere ike ịhọrọ ma ha ga-emikpu onwe ha n'okike kpamkpam ma ọ bụ jikọta ya na oge ezumike n'otu n'ime ogige ntụrụndụ na ogige ntụrụndụ mmiri ọkụ. A maara Druskininkai, obodo SPA dị na Lithuania, dị ka "akpa ume nke Lithuania" n'ihi oke ọhịa ọhịa anwansị anwansi gbara obodo ahụ gburugburu. Ndị bịara Druskininkai nwere ọtụtụ ohere maka ịgwọ oke ọhịa - ha nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè site na ọhịa osisi pine, nwee ọ enjoyụ ogige ntụrụndụ ọhịa UNO ma ọ bụ belata nrụgide site na ịgagharị Ogige ntụrụndụ Dineika. Obodo SPA dịpụrụ adịpụ site na mpaghara ndị mepere emepe siri ike, ọgwụgwọ ịsa ahụ oke ọhịa bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu na Druskininkai.
SPA maka ụmụaka. N'ime afọ ole na ole gara aga, ụmụaka na-agbaso ihe nlereanya nke nne na nna ha ma nabata SPA - nke a agaghị akwụsị. Dị ka SPtù SPA International, ihe karịrị ọkara nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 14,000 SPAs na USA na-enye nchịkọta maka ezinụlọ, ndị nọ n'afọ iri na ụma ma ọ bụ ụmụaka - na Europe na-agbaso nzọụkwụ ha. Mpaghara ụmụaka nwere enyi na-anara ebe SPA - site na saunas ụmụaka nwere omume enyi na ọgwụgwọ nnu. Emere usoro dị iche iche iji mee ka ụmụaka nwee obi ụtọ mgbe ha na-adịwanye mma. Ọbụna usoro ndị mara mma nwere ike ịmegharị maka mkpa ụmụaka. N’Austria, Nnukwu Resort Bad Ragaz bụ ebe dị na SPA ebe ndị toro eto nwere ike isoro ụmụaka kerịta ahụike na usoro mara mma. Ya ụmụaka SPA menu gụnyere mmanụ a honeyụ na ịhịa aka n'ahụ ịhịa aka n'ahụ, ịkpụcha mbọ aka na usoro 'ụkwụ nwere obi ụtọ'. Inhalations, nnu ọgba nnu, apitherapy, ihe nkpuchi ihu na mkpụrụ osisi baths - ọgwụgwọ ndị a dị mkpirikpi gụnyere na mmemme SPA maka ụmụaka na TAOR-Karpaty, ụlọ nkwari akụ Ukraine na ọdịmma.
4. Okpomọkụ na apịtị na-ewu ewu ọzọ. Hammam akwa, ọgwụgwọ apịtị, saunas - ụzọ iji zuru ike ma weghachite nke dị kemgbe ọtụtụ narị afọ - na-aghọwanye ewu ewu n'ihi na ndị mmadụ na-achọpụtakwa uru ahụike ha. Centerslọ ọrụ SPA ọhụụ na-atụgharị usoro ndị a ka ọ bụrụ ahụmịhe pụrụ iche na ahụmịhe site na ịgbakwunye ha na ahịhịa ndị toro eto, mmanụ ndị dị mkpa na ihe ịchọ mma dị elu. Maka emume akwa hammam na ihe karịrị 20 saunas, ndị hụrụ SPA n'anya kwesịrị ịga Druskininkai ntụrụndụ na ebe ahụike aqua, jikọọ FLORES andlọ nkwari akụ na SPA na ebe ezumike Druskininkai. Ebe a na-enye usoro dịgasị iche iche nke jikọtara ihe ndị sitere n'okike na ọgwụgwọ ọdịnala - ihe niile site na apịtị ọgwụgwọ na emume ọla edo. Sauna infrared, nke na-adịghị ekpo ikuku ma na-ekpo ahụ ahụ n'ime, na-ewu ewu. N'ebe a, ikpo ọkụ na-abanye n'ime miri emi, na-ebute nrụrụ siri ike karị, izu ike, mgbasawanye dị mma na akpụkpọ anụ. Kulm nkwari akụ St. Moritz na Switzerland atụmatụ pụrụ iche 30-37 C infrared cabins.
Ọla ndị dị oke ọnụ ahịa na okwute eji agwọ ọrịa. Achọpụtala ọgwụgwọ nke ọla na okwute ndị dị oke ọnụ - dịka ọla ọcha, ọla edo, pear na amba. Ha ga-ejiwanye maka usoro ahụike na mma. A na-ekwu na bath ion bath ion iji meziwanye ahụike na ụda anụ ahụ. Ha na-emekwa ka ahụ na uche dị jụụ, belata ike ọgwụgwụ ma weghachite ume ike. Amber na-ewepụta amber acid na gburugburu ebe obibi mgbe ọnọdụ okpomọkụ kwesịrị ekwesị ruru, na-emetụta usoro ụjọ ahụ ma belata nrụgide. Gold na-eme ka anụ ahụ na-egbuke egbuke ma nwee ike ịgwọ ọrịa dị iche iche na ọrịa n'ihi ọrịa antibacterial. Ọbụna na ntụrụndụ ndị dị ọnụ ala nke Turkey, dịka Aqua Fantasy na Izmir, ndị mmadụ nwere ike ịnwale ịhịa aka na ntụ ọla edo na mmanụ dị mkpa. Amber - nke a na-akpọkarị ọla edo Lithuanian - bụ nke a na-ejikarị eme ihe ọdịmma na Eastern Europe. Ebe SPA dị na Lithuania dị ka Nnukwu SPA Lietuva kpọọ ndị ọbịa ha ka ha gbalịa ịhịa aka amba, ngwa na scrubs. Mgbe usoro mmeghari ahụ ha nwedịrị ike ịnwale tii amba - ihe ọ drinkụ drinkụ na-ejupụta ahụ na ike ọkụ nke nkume a.
ụlọ ọgba center Ụlọ Ọrụ ụmụ chocolate oke Clear nso ikpokọta Mgbagwoju anya kwa amụọ e mere iri ọrịa ọṅụṅụ ịnya ụgbọ n'ihi Eastern Eastern Europe mmetụta ike gburugburu ebe obibi naanị mmega ahụmahụ ọkachamara ezinụlọ echiche efu ike ọgwụgwụ Finland -esonụ nzọụkwụ ọhịa French enyi na enyi Gaba! gold ọkara isi na-agwọ ọrịa ahụ ike okpomọkụ ezumike holistic home Hot mma mma gụnyere mmepụta ihe otutu ime izmir Japan na- ụmụaka Oge ntụrụndụ Lithuania na mpaghara ndị hụrụ mara mma masks menu uche kasị ewu ewu apịtị ogige ntụrụndụ nke mba eke ọdịdị nbsp mkpa Northern Europe -enye nchịkọta nne na nna park gara aga Ugochukwu ewu ewu ewu ewu mma ike Nga adịchaghị mgbali usoro usoro àgwà -adịbeghị anya ntụrụndụ belata Zuo ike ntụrụndụ eme ntụrụndụ dịghachi kpughere ride nri na-ebili emume Njem Ileta Ụmụ Anụmanụ nnu nhọrọ share obere skai ogige ntụrụndụ spa spas mmiri St -anọ nkume Kwụsị nchegbu Switzerland usoro ewere tii okpomọkụ ọgwụ ụda obodo ọdịnala omenala na-emeso agwọ ọrịa osisi -emekarị Trends njem agbalị turkish ụdị USA ojiji -ABỤ ezumike dịgasị iche iche Wellness yoga